UMSAKAZI UGIXABEZWE NGE- FORD KUGA | IOL Isolezwe
UMSAKAZI UGIXABEZWE NGE- FORD KUGA
Isolezwe / 21 June 2012, 07:34am /
ABAKHIQIZI bezimoto zakwaFord eNingizimu Africa, sezigixabeze isilomo somsakazi wakwaMetro FM ngentsha ceke iFord Kuga. U-Unathi Msengana, obuye abe lijaji emncintiswaneni onedumela lokubheka amakhono abaculi kuleli ama mnet Idols, wemukele le moto ngeledlule eSilverton eMpumalanga yePitoli, emuva kokuba evakashele imboni okukhiqizwa kuyo lezi zimoto zakwaFord.
UGavin Golightly, oyiMarketing Manager kwaFord SA, uthi iKuga iyisitayela sesimanje. Uthi ayigcini ngokubukeka kahle nje kuphela kodwa nokuyishayela kumnandi futhi kwenziwe kwalula. “Njengomama wabantwana ababili, onomsebenzi omatasatasa, iKuga imfanele u-Unathi nendlela aphila ngayo.
Siyaziqhenya futhi ngokuba ngabaxhasi bama-Idols, ngakhoke ukuxhasa kwethu u-Unathi kusahambisana nalolu hlelo,” kusho uGolightly. U-Unathi, ongumsakazi, umculi, umbhali wezingoma, ijaji lama Idols, uya ngokuya uyadlondlobala emkhakheni wezenjabulo eNingizimu Africa. Muva nje usanda kukhipha i-albhamu yakhe yesithathu esihloko sithi With Love, elama esihloko sithi In Honour, eyadayisa kahle yaze yashaya igolide.
“Usuku nosuku uhamba ngeKuga, luza nokuthize okusha.
Kusukela enjinini enamandla, izihlalo ezifudumalayo, wukhakhayi olukwenza ubone ngaphandle oluyiPanoramic, wukuxhumana kwefoni yami nemoto nge-bluetooth ukuze ngidlale umculo oyintando yami, nokunye, kwenza ukuhamba kwami ngale moto kube mnandi,” kusho u-Unathi.
Ngale kwamatasatasa akhe ansuku zonke u-Unathi uchithe isikhathi ePitoli eyobona lapho kuphekwa khona izimoto zakwaFord eSilverton, lapho ebekhonjiswa khona izingxenye ezehlukene waphinda wasayina nama-autograph ejatshulelwa ngabasebenzi bakwaFord. “Bengifuna ukubona ukuthi izimoto zakhiwa kanjani nokuhlangana nje nalaba bantu abasebenza kanzima kangaka bakha lezi zimoto zakwaFord.
Kube wuhambo oluhle kimina olungifundise okuningi ngezimoto,” kusho u-Unathi.